XOG: Maxay Yihiin Sababaha Ay Liverpool Ugu Guulaysan Karto Koobka UEFA Super Cup Ee Ay Chelsea Ugu Garaaci Karto Kulanka Istanbul? - Gool24.Net
XOG: Maxay Yihiin Sababaha Ay Liverpool Ugu Guulaysan Karto Koobka UEFA Super Cup Ee Ay Chelsea Ugu Garaaci Karto Kulanka Istanbul?
Koobka saddexaad ee ay UEFA qabto ayaa isna la keeni doonaa dalka England kadib markii ay kooxaha Liverpool iyo Chelsea hore u keeneen koobabkii Champions League iyo Europa League, laakiin kooxda Liverpool ayaa haddaba loo arkaa in ay tahay kooxda ugu cad cad ee koobkan ku guulyasan karta.
Liverpool ayaa heshay fursad ka fiican tan ay Chelsea u haysato u diyaar garowga finalka UEF Super Cup waana arin cadho wayn ku abuuraysa jamaahiirta kooxda Blues.
Liverpool waxay hore cadho uga muujisay sababta ay jimcihii uu ciyaareen kulankii furitaanka ee Premier league iyada oo Jurgen klopp uu diidanaa in finalkii Community Shield ee Man City iyo kulanka Norwich ay ahaayeen kuwo laysku dhaweeyay.
Laakiin arintan oo kale waxaa la kulmi doonta Chelsea oo axada barri kulan wayn ku booqan doonta Man United kaas oo ah kulanka furitaanka Premier Leauge waxayna kulankan ciyaari doonaan iyada oo Liverpool sii bilaabtay diyaar garowga finalka UEFA Super Cup.
Sababta kowaad ee ay Liverpool ugu cad cadahay in ay koobka UEFA Super Cup ku guulaysan karto ayaa ah in Chelsea ay laba maalmood kadib kulankeeda Premier league oo waliba kulan wayn ah ciyaarayso halka Liverpool ay jimcihii sii ciyaartay kulankeeda.
Sababta labaad ee ay Liverpool fursad wayn koobkan ugu haysato ayaa ah in Chelsea ay lumisay xidigii Liverpool dhibaatada ugu badan ku abuuri jiray ee Eden Hazard kaas oo ayna Blues waqti kooban kaga maarmi karin adeegii uu kooxdeeda u hayay.
Sababta saddexaad ayaa ah mid la xidhiidha khibrad yaraanta Frank Lampard ee maamulida halka ugu saraysa ee kooxaha Yurub iyada oo kulanka Manchester United uu u noqon doono tijaabo min qiyaas looga qaadan doono.
Arinta kale ee aan marnaba meesha laga saari karin ayaa ah in Liverpool ay tahay koox si wayn iskula haysata oo ka kooban ciyaartoy uu in badan Jurgen Klopp ku soo shaqeeyay halka Lampard uu hadda wali raadinayo shaxdiisa ugu fiican ee uu ku ciyaari karo.
Riix 2 si aad xogta kulanka Finalka UEFA Super Cup ee Liverpool iyo Chelsea u sii akhrisato.